Fividianana fiara fitateram-bidy - Easy Multi Display - signage nomerika
Fivarotana kojakoja fiara fitateram-bahoaka any Ghana no natoky ny Easy Multi Display!
"Mora tokoa ny manasongadina vokatra amin'ireo mpanara-maso ahy amin'ny Easy Multi Display!"
Acton Motor Spares dia orinasa iray mivarotra kojakoja fitehirizana fiara ao Accra, Ghana, ny talen'ny Abdul ary ny fivarotany dia efa manana isa maherin'ny 300 isa amin'ny Google! Izany no antony mahatonga ny mpanjifa maro isan'andro tonga ao amin'ny Acton Motor Spares hividy kojakoja fitehirizana!
Tranonkala Acton Motor Spares
Abdul dia te hampiroborobo ny fiara fitehirizany manerana ny sary sy ny horonan-tsary momba ny fampiroboroboana, noho izany, nangataka tamin'ny Easy Multi Display izy mba hanome torohevitra azy momba ny vahaolana takelaka nomerika tsara indrindra hisafidianana, noho izany dia manolotra azy izahay hoe Easy Multi Display, resy lahatra avy hatrany amin'ny rindrambaiko izahay ary nanapa-kevitra matoky anay!
Orinasa mamatsy fitaovana tsara ny Acton Motor Spares satria efa manana mpanara-maso 10 ny fivarotana. Mba hampisehoana ny atiny amin'ireo mpanara-maso azy, dia nanapa-kevitra i Abdul fa hividy solosaina filalaovana 2 izay hitantana mora foana ireto 10 mpanara-maso ireto, tariby 10 HDMI ary kinova 2 "standard" an'ny Easy Multi Display handefasana amin'ny solo-sain'izy ireo. Farany, ny vahaolana feno nataony dia mitentina 3200 Euros.